Vavanya umlinganiso woHlolo oluQikelelweyo usebenzisa ukulingana kokuzimisela, R2
Ngaba i-tylenol ilungile ngokudumba
Emva kokuba uqikelele umgca wokuhlengahlengiswa kwabemi, unokujonga ukuba ngaba umlinganiso wokuhlengahlengiso unengqondo ngokusebenzisa ubungakanani bokuzimisela, okwaziwa njenge R Mbini( R ophindwe kabini) Oku kusetyenziswa njengomlinganiso wendlela i-regression equation eyiyo echaza ngayo ubudlelwane phakathi kokwahluka okuxhomekekileyo ( Y ) kunye nokwahluka okuzimeleyo ( X ).
Kungenzeka ukuba kungabikho ubudlelwane bokwenene phakathi kwezinto ezixhomekekileyo nezizimeleyo; Ukuhlengahlengisa okulula kuvelisa iziphumo nokuba kunje. Kubalulekile, ke ngoko, ukuba ubeke iziphumo zokuhlengahlengiswa kuvavanyo oluphambili olwenza ukuba ubone ukuba iziphumo zinokuthenjwa.
Ukulingana kokuzimisela, R Mbini, ngumlinganiso weenkcukacha manani obonisa ubungakanani be ukwahluka ichazwe ngumgca wokuhlengahlengiswa oqikelelweyo. Umahluko ubhekisa kwisilinganiselo somahluko ophindwe kabini phakathi kwamaxabiso Y kunye nexabiso elithethiweyo le Y , ibonakaliswe ngokwezibalo njenge
R Mbiniihlala ithatha ixabiso phakathi kwe-0 kunye ne-1. Okusondeleyo R Mbiningu-1, kokukhona ulungelelwaniso lokulinganisa oluqikelelweyo lulunga okanye ucacisa ubudlelwane phakathi X kwaye Y .
ikwabizwa ngokuba yi Itotali iyonke yezikwere (TSS).
Esi sixa sinokuhlulwa ngokwamacandelo amabini alandelayo:
Inani elichaziweyo lesikwere (ESS): Ikwabizwa ngokuba yi ichaze umahluko , i-ESS yinxalenye yokwahluka okupheleleyo okulinganisa ukuba ulungelelwaniso kwakhona luchaza njani ubudlelwane phakathi X kwaye Y .
Ulinganisa i-ESS kunye nefomula
Inani elipheleleyo lesikwere (RSS): Eli binzana likwaziwa njenge Umahluko ongachazwanga kwaye yinxalenye yokwahluka ngokupheleleyo okulinganisa ukungangqinelani (iimpazamo) phakathi kwamaxabiso kanye Y kwaye ezo ziqikelelwa kukulinganiswa kokulingana.
Ubala i-RSS kunye nefomula
Ixabiso elincinci le-RSS xa kuthelekiswa ne-ESS, ngcono umgca wokuhlengahlengisa ulingane okanye ucacise ubudlelwane phakathi kokuxhomekeka nokuzimela okwahlukileyo.
nini ukuthatha i-cialis
Itotali yesikwere iyonke (TSS):
Isixa se-RSS kunye ne-ESS silingana ne-TSS.
R MbiniUmyinge wesikwere esichaziweyo (ESS) ukuya kwisamba esipheleleyo sezikwere (TSS):
Unokusebenzisa le fomyula:
Ngokusekwe kwinkcazo ye- R Mbini, ixabiso laso alisoze libe lelibi. Kwakhona, R Mbiniayinakuba nkulu kune-1, ke
Ngokuhlalutya okulula, R Mbiniilingana nesikwere sonxibelelwano phakathi X kwaye Y .
Ngaba i-tylenol inceda ngokudumba
Ukulingana kokumiselwa kusetyenziswa njengomlinganiso wokuba umgca wokubuyela umva ucacisa njani ubudlelwane phakathi kokungafani okuxhomekekileyo ( Y ) kunye nokwahluka okuzimeleyo ( X ). Ukusondela kokulingana kokumiselwa kukuya kwi-1, ngokusondeleyo umgca wokubuyela umva ulingana nedatha yesampulu.
Ukulingana kokumiselwa kubalwa ukusuka kwizikwere. Ezi zibalo zishwankathelwe kule theyibhile ilandelayo.
Ukwenza ikhomputha ye-ESS, uthabathe ixabiso elichazayo Y ukusuka kumaxabiso aqikelelweyo e Y ; Ikota nganye iphindwe kabini kwaye yongezwa ngokudibeneyo:
Ukwenza i-RSS, uthabatha ixabiso eliqikelelweyo le- Y ukusuka kumaxabiso okwenyani e Y ; Ikota nganye iphindwe kabini kwaye yongezwa ngokudibeneyo:
Ukwenza ikhomputha ye-TSS, uthabatha ixabiso elichazayo Y ukusuka kumaxabiso okwenyani e Y ; Ikota nganye iphindwe kabini kwaye yongezwa ngokudibeneyo:
Ngenye indlela, unokongeza ngokulula i-ESS kunye ne-RSS ukufumana i-TSS:
I-TSS = ESS + RSS = 0.54 + 0.14 = 0.68
Ukulingana kokumiselwa ( R MbiniUmlinganiso we-ESS ukuya kwi-TSS:
Oku kubonisa ukuba iipesenti ezingama-79.41 zomahluko kwi Y ichazwa ngokwahluka kwi X . Kuba ulungelelwaniso lokuzimisela alunakugqitha kwiipesenti ezili-100, ixabiso elingu-79.41 libonisa ukuba umgca wokuhlengahlengisa ngokusondeleyo uhambelana ngqo nedatha yesampulu.
hydralazine 25 milligram tablet
zi-ibuprofen kunye ne-tylenol efanayo
I-apics ye-physics 2 iphepha lokulinganisa
Impembelelo yegrapefruit kunyango
ipepto bismol ikhuselekile